Izithuthi isilinda ikhanda
I-crankshaft yemoto okuningi >>
Ifanele izimoto, imikhumbi, izimoto zobunjiniyela, imishini yezolimo, isethi ye-generator, ikhwalithi yangempela, enokubukeka okuhle, ukuminyana okuphezulu, ubushelelezi, ukukhanya nokuqina ngemuva kokuqeda. Umkhiqizo ngamunye uhlolwe ngokuqinile futhi ikhwalithi yawo iqinisekisiwe. Ukupakisha ibhokisi kunokubukeka okuhle nomjikelezo wokukhiqiza oqinile: izinsuku zokusebenza ezingama-20-30, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yokuhamba: umhlaba, ulwandle nomoya.
I-camshaft yemoto okuningi >>
Ifanele izimoto, imikhumbi, izimoto zobunjiniyela, imishini yezolimo, ikhwalithi yangempela, enokubukeka okuhle, ukuminyana okuphezulu, ubushelelezi, ukukhanya nokuqina ngemuva kokuqeda. Umkhiqizo ngamunye uhlolwe ngokuqinile futhi ikhwalithi yawo iqinisekisiwe. Ukupakisha ibhokisi kunokubukeka okuhle nomjikelezo wokukhiqiza oqinile: izinsuku zokusebenza ezingama-20-30, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yokuhamba: umhlaba, ulwandle nomoya.
I-flywheel yemoto okuningi >>
Izithuthi isilinda ikhanda okuningi >>
High Precision crankshaft efanelekayo RenaultR4
Ikhwalithi yemoto esezingeni eliphakeme ilungele i-Ren ...
Ikhwalithi ephezulu yemoto iFlywheel
Uhla oluphelele lwe-crankshafts yezimoto Cran ...
Ikhwalithi ephezulu eyisilinda
UShijiazhuang Samuel Auto Parts Co., Ltd.ngumkhiqizi oqeqeshiwe wezingxenye zezimoto. Eminyakeni yokukhiqiza nokusebenza, isungule umugqa wokukhiqiza nowokucubungula ngobuchwepheshe obuhle kakhulu, imishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme, izindlela zokuqala zokuhlola kanye nokuphathwa kwekhwalithi eqinile. Isitifiketi se-ISO9001 2000 samazwe omhlaba jikelele, ikhwalithi ifinyelela emazingeni ezobuchwepheshe we-crankshaft yangaphakathi yenjini yomlilo JB / T6727-1999, JB / T51049-1999.
I-Renault Peugeot crankshaft ithunyelwe eGibhithe
Umkhiqizi weChina High Quality Custom Alloy Steel Engine Crank Transmission Spline Shaft Custom Made
Qala i-Jurney yakho
Eningizimu yeZongshizhuang Village, iZongshizhuang Town, Jinzhou City, Shijiazhuang City, esifundazweni saseHebei